मध्यपश्चिम डायरी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आश्विन १२, २०६९ अनमोलमणि
थला परेका राउटेसल्यान जाँदै गर्दा बाटोमा कसैले भन्यो, राउटे मुखिया खुट्टा भाँचिएर सिकिस्त छन् ।
थला परेका राउटे
सल्यान जाँदै गर्दा बाटोमा कसैले भन्यो, राउटे मुखिया खुट्टा भाँचिएर सिकिस्त छन् । सुनेपछि भेट्न मन लाग्यो । साथी उपेन्द्र लामिछाने र मेरो हुटहुटीमा राउटे बस्ती रहेको सल्यानको गाडापानी खाटखोला जाने निधो भयो । श्रीनगर जाँदै गर्दा सडकबाट ओरोलो झर्‍यौंं । खाट खोला तर्‍यौं । दाम्सिलो उकालो सकिएपछि भेटियो राउटे बस्ती ।
बस्तीमा पुग्दा एकजना पाको उमेरकी र दुईटी युवती ओखलमा धान कुट्दै थिए । तीनजना केटोकटी नांगै कुद्दै थिए । हामी उक्लिँदै गरेकेा देखेपछि दुईजना महिला र केही केटोकटीले पछाडिको खोरमा धमाधम बाख्रा हुलेर केही छैन झैं टम्म ढोका लाए । सायद केही छैन भन्ने देखाउन हो वा लैजान्छन् भन्ने डरले, बुझिएन । बाहिर भएका महिला पालभित्र पसे । केटाकेटी कुदाकुद गर्दै यता र उता गर्न थाले । मानो कुनै हुरी बतास आउँदै छ ।
धान कुट्दै गरेका महिला छेउ न्याउरो भएर धुम्धुम्ती बसिरहेका थिए मानबहादुर राउटे । देब्रे खुट्टो मैलो हरियो टालोले कुर्कुच्चासम्मै बाँधिएको थियो । खुट्टो हल्का सुन्निएको थियो । कहिल्यै ननुहाएका पिँडुलामा मयल पत्रेदार भएर जमेको थियो । एउटा मैलो कछाडले शरीर छोपेर ढुंगोमाथि खुट्टो अड्याएर उनी अररिएका थिए । उनलाई देखेपछि थाहा भयो सुनेजस्तो राउटे मुखिया ऐनबहादुर घाइते भएका होइन रैछन् । घाइते हुने ऐनका छोरा मानबहादुर रहेछन् । डेढ महिनाअघि हिँड्दै गर्दा ट्रकले उनको खुट्टो किचेर भागेछ । अरू त्यसरी घाइते हुँदा हुन् त क्षतिपूर्तिका लागि सडक बन्द र सवारी तोडफोड भइसक्थ्यो । राउटे समूह रगतपच्छे खुट्टोसहित उनलाई बोकेर लुरुलुरु बासस्थान आएछ । घरेलु उपचारले घाउ सन्चो हुनुको साटो इन्फेक्सन हुँदै गएको छ । र पनि उनी अस्पताल जान चाहँदैनन् । खुट्टा नटेकिने भएपछि सिकार जाने कुरै भएन ।
'आमालाई म मर्छु कि भन्ने पीर छ, रोएको रोएै गर्छिन्,' एउटा पालभित्र बसेकी पाकी महिला देखाउँदै उनले भने, 'मलाई कुल्चिने त्यो गाडी कहाँ पुग्यो होला ? म ट्रकले किचेर बिरामी भएको कुरो उता मन्त्रीलाई अझै थाहा भएको छैन ?'
साथीहरू फोटो खिच्न थाले । ओखल चलाउँदै गरेकी महिलाले क्यामेरा जतिपल्ट क्लिक हुन्छ त्यतिपल्ट दाहिने हातको बुढी र चोर औंला चिप्ल्याउँदै 'पैसा पौसा' भनिन् । नपाएपछि रिसले भाउन्निएर जंगलतिर लागिन् । केटाकेटी यता उता कुदाकुद गरिरहे । 'आइमाईहरू हेरिरहेको र फोटो खिचेको मन पराउँदैनन्,' मानबहादुरले नम्र भएर भने, 'फोटो खिच्दा हाम्रो सिकार पनि बिगि्रन्छ ।'
उपचारका लागि अस्पताल जान दिएको सल्लाह उनले सुने नसुन्यै गरे । महिला रिसाएर हिंडेपछि उनले 'सानो अनुरोध थियो' भन्दै हामीसित पैसा मागे । त्यहाँको अरू पनि फोटो खिच्ने सर्तमा १६ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दै गर्दा सिकारबाट फर्किदै गरेका उनका साथीहरू अर्को डाँडोमा देखिए । त्यसपछि उनले मेरो हातमा रहेको पैसा घसि्रएरै तानुँलाझैं गरे । साथीहरू देखाउँदै भने, 'उनीहरूले देखे सबैलाई बाँड्नुपर्छ म बिरामीलाई दिइहाल्नुस् न ।' पौसा हात परेपछि हतपत टाउकामा राखेर ऊनीको खैरो टोपीले छोपे । मैले सम्झें उनका बुवा मुखिया ऐनबहाुदरलाई लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको कारण सायद यस्तै होला ।
उनीसित छुट्टएिर ओरालो झर्नै लाग्दा भने, 'म बिरामी भएको काठमाडौंमा मन्त्रीलाई सुनाइदिनुहोला । यसबारे उनीहरू -मन्त्री) सित कुरा गर्नु छ ।'
कुनै एनजीओले फेरि उनीहरूलाई काठमाडौं ल्यायो भने सायद यही विषयमा कुरा होला ।
मध्यपश्चिमका बाँके, दाङ र सल्यान घुम्दा तीन चीज देखियो, साक्षरता कक्षा, सामान्य तालिमबाट आफैं उद्यमी भएका युवा र तरकारी खेती ।
नेपालमा साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी छैन । अमेरिकी विकास नियोगले चलाएको एजुकेसन फर इनकम जेनेरेसनको साक्षरता कार्यक्रम पनि पैसा सक्ने मेलो होला भन्ठानेको थिएँ । तीन जिल्लाका गाउँ, खेत, डाँडापाखा पुगेर साक्षरता कक्षा पढेका महिलाहरूको सिर्जनात्मक सोच सुनेपछि लाग्यो, साक्षरता प्रभावकारी बनाउन अक्षरमात्रै होइन उनीहरूको आय आर्जनसित जोडिएर सीप सिकाउनुपर्छ ।
कोहलपुरको सामुदायिक वनमा क्यामोमाइल, मेन्था र सिट्रोनेला गोडमेलमा भेटिएका बोटनी थारू र हेलानी थारूले खेर गइरहेको जमिन प्रयोग गरेर समूहमा काम गर्न र आयआर्जन गर्न साक्षरता कक्षाबाट जानेका छन् । दाङको साक्षरता कक्षा पढ्ने पूर्वकम्लरीहरू सनकुमारी, सुनिता, सुन्तली र सरिता चौधरीले तरकारी खेती गरेरै अवस्था सुधारेका रैछन् । सल्यानको गार्पा डाँडामा खुर्सानी र गोलभेंडा फलाउने दुर्गा घर्ती र लाम्तीमा बन्दा र मूला फलाउने हिमा दसौंदीले पनि कोरा अक्षरभन्दा सीप जोडिने साक्षरतालाई आफ्नो प्रगति गुरु मानेका छन् ।
उनीहरूको कुरा यस्तो थियो, अक्षरसँगै उनीहरूले खेतीको नयाँ तरिका सिके । कसैलेे पैसा दिएको छैन । आफैंले बीउ किने, किसान र महिलाको समूह बनाए । सहकारी चलाएका छन् । उत्पादन बोकेर आफैं बजार धाएका छन् । र, आर्थिक अवस्था पछिल्लो तीन वर्षमै बदलेका छन् । कसैले नयाँ घर बनाए । कसैले जग्गा जोडे । कसैका श्रीमान् विदेशबाट फर्के ।
उदाहरण ११ हजार
मध्यपश्चिमका करिब साढे ११ हजार युवा उद्यमी हुने तरखरमा छन् । हिजो भारतमा मजदुर भएकाहरू स्वदेश फर्केर आफैंले उद्यम सुरु गरेका छन् । २-४ जना कामदार राखेर शानसित बसेका छन् ।
तीन वा ६ महिनाको सामान्य तालिम लिएर कोही पि|mज बनाइरहेका छन् । कोही मोटरसाइकल वर्कसप खोलेर बसेका छन् । कोही चिया त कोही मिठाई पसल चलाइरहेका छन् । कोही मोबाइल बनाउने उद्यममा छन् । कोही खेती किसानीमै व्यस्त छन् । उनीहरूको मासिक आम्दानी मासिक १० देखि २५ हजारसम्म छ ।
सल्यानको बरेलामा एक डोको गोलभेंडा बेच्न आएका कजेरी गाविसका २९ वर्षे धनिराम कुँवरले भनेका थिए, 'अचेलका युवा बजारबाट एक प्लास्टिक तरकारी किनेर झोला हल्लाउँदै घर जाँदा गर्व गर्छन्, जहाँ पैसा सकिन्छ । आफ्नो खेतमा तरकारी फलाएर डोकोमा बेच्न जान लाज मान्छन् । जहाँ पैसा आउँछ ।'
युवालाई रातारात धनी हुनुपरेको छ । धनी कसरी धनी भए उनीहरू कहिल्यै सोच्दैनन् । आफ्नो क्षमता के हो कहिल्यै बुझ्दैनन् । कन्फ्युसियसले त्यसै भनेका होइन रहेछन्, 'मान्छे तलाउमा तैरिने हाँसले पखँेटा फटफटाएको सुन्दर दृश्यमात्रै देख्छ, पानीभित्र मेहनतसाथ उसले चलाएको खुट्टो पनि हेर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै ठान्दैन ।'
मध्यपश्चिमका 'युवा हाँसहरू'ले चलाएको पाउ अरू कति युवाले देखेका होलान् ?
प्रकाशित : आश्विन १३, २०६९ ११:२१
गज्जब जागिर !
आश्विन १२, २०६९ सुजित महत
उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार भनेर जागिरलाई खासै महफ्व नदिने नेपाली समाज बिस्तारै जागिरतिर तानिँदै गएको छ । केही सरकारी र केही गैरसरकारी जागिरमा बढेको तलब, सुविधा र प्रतिष्ठाले जागिरको इज्जत बढेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता बि्रगेडियर जनरल रमिन्द्र क्षेत्रीका चारमध्ये तीन दाजुभाइले सेनामा जागिर खाए । उनका बुवा, बाजे, जिजुबाजे लगायत थाहा भएसम्मका पुस्ता सैनिक थिए । नेपाल एकीकरण अभियानभन्दा अघिदेखि आपmना पुर्खा गोर्खाली सैनिक रहेको उनी बताउँछन् । तर यही पुस्तादेखि उनको परिवारमा जागिरको क्रमभङ्गता सुरु भएको छ । चार दाजुभाइका आठ सन्तान सेनामा जान चाहेनन् । 'हाम्रो पालासम्म पो विकल्प सीमित थियो,' क्ष्ाेत्री भन्छन्, 'अहिले त बाहिर मात्र होइन मुलुकभित्रै बिटाका बिटा तलब पाइने अवसर छन् ।'
क्षेत्रीले भनेझंै नेपालमा महिनामै छ अंकमा तलब बुझ्ने जागिर धेरै भइसकेका छन् । यिनमा सबभन्दा अगाडि विदेशी नियोग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका जागिर छन् । यूएनडीपीमा अधिकृतस्तरको स्थायी जागिरेले तलब र भत्ता गरी वर्षमा करिब ३० लाख रुपैयाँ बुझ्छन् । यहाँ सहायकस्तरको कर्मचारीकै हातमा वाषिर्क १२ लाख रुपैयाँ पर्छ । विश्व बैंकको काठमाडौं कार्यालयमा अर्थशास्त्री पदमा कार्यरतले महिनामा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यी अर्थशास्त्री उपत्यकाबाहिर गए दिनको २० हजार रुपैयाँ भत्ताको हकदार बनिहाल्छन् । परामर्शदाताको दैनिक पारिश्रमिक ५ हजार ५ सय छ । भ्रमण भत्ता दिनको ७-८ हजार हुन्छ ।
अर्को दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको काठमाडौंस्थित कार्यालयको जागिर पनि कम आकर्षक छैन । विश्व वन्यजन्तु कोष -डब्लुडब्लुएफ) मा अफिसरले वर्षमा १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बुझ्छन् । इसिमोडको तलब सुविधामा अरू अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका जागिरेले पनि इष्र्या गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको जागिरमा आकर्षक तलब भत्ता, छोराछोरीलाई पढाउने खर्च, औषधि उपचार खर्चका साथै जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा लगायतका सुविधा हुन्छन् । 'सामान्यतया तलब र भत्ता जोड्दा हुने रकमको ४० प्रतिशतजति अन्य सुविधाबापत थप पाइन्छ,' यूएनडीपीमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन् ।
छिटोछिटो हुने राजनीतिक परिवर्तन र निकै धीमा गतिमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रका कारण उत्पादन र उद्योग गरेर ठूलो नाफा कमाउनेभन्दा जागिरमा सुरक्षित हुन चाहनेको संख्या बढ्दो छ । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषिजस्ता कामबाट पनि युवाहरू विमुख भएका कारण जागिरमा युवाको चाप बढ्न थालेको छ ।
पञ्चायतको पुछारतिर विदेशी लगानी भित्र्याइएपछि वित्तीय क्षेत्र 'हरियो घाँसको मैदान' बन्यो । विदेशी र स्थानीय साझेदारीमा खुलेका बैंकमा सुट टाईमा ठाँटिएर वातानुकूलित अफिसमा काम गर्ने अवसर मात्र होइन, तलब, भत्ता र बोनसको रूपमा आकर्षक रकममा हात पर्न थाल्यो । सामान्तया दसैंको मुखमा बोनस हात पर्ने भएकाले बैंकका जागिरेले चाड पनि खुलेर मनाउन पाए । मध्यमवर्गीय परिवारका लागि बैंकर उपयुक्त ज्वाइँ बन्न पुगे । च्याउ उमि्रएसरी बैंक/वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि सबैले तल्लो पदसम्म आकर्षक सुविधालाई निरन्तरता दिन त सकेनन् तैपनि नाम चलेका बैंकमा अहिले पनि कर्मचारी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
नबिल बैंकमा भर्खर प्रवेश गरेको जुनियर असिस्टेन्टले वर्षमा करिब ४ लाख रुपैयाँ -बोनस र सुविधासमेत) बुझ्छन् । अलि पुरानो भएपछि यही पदको कर्मचारीको गोजीमा वर्षमा ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रकम पर्छ । एक तह माथिको असिस्टेन्ट करिब ७ लाख रुपैयाँको हकदार हुन पुग्छ । जागिर स्थायी हुनासाथ नबिलले करिब ५ प्रतिशत ब्याजमा गाडी कर्जा उपलब्ध गराउँछ । पाँच वर्ष जागिर पुगेपछि कार किन्न कर्जा दिन्छ । त्यससँगै एक सय महिनाको तलब बराबरको रकम आवास कर्जाका रूपमा पाइन्छ ।
'हाम्रो बैंकमा पाँच वर्ष जागिर खाएपछि जुनसुकै कर्मचारी निजी सवारी र घरको मालिक बन्न सक्छ,' नबिलका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका लागि बैंकले सञ्चयकोषको व्यवस्था गरेको छ । अवकश लिएपछि सरकारी जागिरजस्तो आजीवन पेन्सन सुविधा नभए पनि उपदानबापत एकमुष्ठ रकम पाइन्छ । जागिर अवधिमा वर्षको साढे २ महिनाको आधारभूत तलब भत्ताको हिसाबले उपदान सुविधा छ । जस्तो २० वर्ष जागिर खाएको भए ५० महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ठ हात पर्छ । यसैले त बैंकले प्लस टु न्यूनतम योग्यता तोकेको जुनियर असिस्टेन्ट पदमा आवेदन गर्ने अधिकांश ब्याचलर पास हुन्छन् । मास्टर्स गरेका समेत जुनियर असिस्टेन्टमा ट्राई गर्न पुग्छन् । प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको लगानी भए पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकमा तल्लो तहमा तलब सुविधा नबिलभन्दा कम छ । चाँडै बोनस घोषणा भएपछि बैंकका अफिसरको वाषिर्क आम्दानी ७ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
पछि खुलेका बैंकको नाफा स्थापित बैंकको जस्तो नभएकाले होला तलब सुविधामा कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । जस्तो सनराइज बैंकले अफिसरलाई तलब/भत्तामा वर्षमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । तर यसमा बोनस र बिमा रकम जोड्दा उक्त बैंकको जागिरलाई पनि छ्या भन्न सकिन्न ।
गैरसरकारी संस्था र बैंकपछि एकछिन विचरण गरौं टेलिकम कम्पनीहरूतर्फ । यसबीचमा मोबाइल, इन्टरनेटमा जनताको पहुँच विस्तारसँगै टेलिकम कम्पनीहरूको मुनाफा बढेको छ । यसको फाइदा कम्पनीमा जागिर खानेले पनि पाएका छन् । नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर जतिसुकै कमसल भए पनि यसका कर्मचारीले पाउने तलब सुविधा असल छ । टेलिकमले तलब, मासिक भत्ता, मेडिकल भत्ता, पोसाक भत्ता, खाजा, वाषिर्क भत्ता शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँछ । तिनले निर्धारित सीमाभित्र मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवा सित्तैमा पाउँछन् ।
नेपाल टेलिकमको पुछार तहको कर्मचारीले वर्षमा तलब र भत्तामा २ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । तिनले १४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्मको सित्तैमा मोबाइल र २४ हजारसम्म ल्यान्डलाइनको सीमाभित्र रहे थप गोजीको पैसा खर्च हुन्न । चौथो तह -खरिदारसरह) को कर्मचारीले ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ हात पर्छ । मोबाइलमा ६ हजार र ल्यान्डलाइनमा ३० हजार रुपैयाँको सेवा सित्तैमा पाइन्छ । टेलिकममा अधिकृत -छैटौं) तहमा जागिर भए ४ लाख ७० हजार हात पर्छ । मोबाइल ७ हजार २ सय र ल्यान्डलाइनमा ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालले चुरोट उत्पादक कम्पनीमा कार्यरतलाई दिएको सुविधा अझ इष्र्यालाग्दो छ । कम्पनीका अदक्ष कामदारको मासिक तलबमान त १० हजार छ । तर तिनले बोनससमेत जोड्दा गत आर्थिक वर्ष मासिक ४१ हजार रुपैयाँको औसतमा रकम बुझेका थिए । यसमा तिनले वर्षमा पाउने दुई जोर पोसाक, जुत्ता/मोजा र बिमा खर्च जोडिएको छैन । तर चुरोट बजारमा एकाधिकारका कारण उच्च मुनाफाका साथै कम कर्मचारी -करिब ३ सय) भएकाले यति धेरै रकम पाउन सम्भव भएको हो ।
डाबर नेपालमा कामदारको तलब सूर्य नेपालको आधा पनि पुग्दैन । तैपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तलब सुविधा हाम्रो सन्दर्भमा सम्मानजनक छ । कुरियर ओसार्ने डीएचएलले असिस्टेन्ट तहका लागि तलब भत्तामा -सुविधाबाहेक) वर्षमा १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ । कम्पनीले अफिसरका लागि तलबभत्तामा २ लाख ५० हजार खर्च गर्छ । कर्मचारीले तलब, भत्तामा पाउने रकमको ४० प्रतिशत थप रकम सुविधाबापत पाउँछन् ।
हालै राष्ट्र बैंकले उपत्यकाबाहिरका कार्यालयका लागि सहायक प्रथम तहको ४५ पदमा विज्ञापन गर्दा २९ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । केन्द्रीय बैंकको जागिरमा यतिबिघ्न आकर्षण हुनुमा यसमा पाइने तलब सुविधा नै हो । बैंकमा सहायक प्रथमको सुरु तलब -ग्रेड नजोड्दा) महिनामा १६ हजार ६ सय ९० छ । केन्द्रीय बैंकको जागिरमा केन्द्रीय बैंक भत्ता, खाजा, पोसाक र औषधि उपचार गरी तलब बराबरको थप रकम हात पर्छ । बैंकले विदेशमा विदेशी विनिमय लगानी गरी आम्दानी भएको रकम सरकारलाई बुझाएपछि बचेको कल्याणकारी कोषमा हाल्ने गर्छ । यसबाट निश्चित रकम वर्षमा एकपटक कर्मचारीलाई वितरण हुन्छ । यसबाट बैंकका कर्मचारीले ४० हजारदेखि साढे २ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन् । यसबाहेक आवास निर्माण र मर्मतमा गरी १२/१२ लाख रुपैयाँ पाइन्छ । सहायक निर्देशक भनिने अधिकृत -तेस्रो) तहको सुरु तलबमान २१ हजार ५ सय ८० छ । अवकाश लिँदा १० वर्षको पेन्सनबराबरको रकम एकमुष्ठ पाउनु राष्ट्र बैंकको अर्को आकर्षण हो ।
सबैभन्दा तल्ल्ाो तहका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा सबैभन्दा पुछारका कर्मचारीले १० हजार तलब र १० हजार २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता र सबै तहका कर्मचारीले १ हजार ५ सय इन्टरनेट भत्ता पाउँछन् । विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा र बुटवलमा कार्यरत रहँदा २ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ तथा धनकुटा, सुर्खेत र धनगढीमा हुदा ३ हजार रुपैयाँ थप भत्ता छ । पोसाकबापत ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पाइन्छ । औषधि उपचार गर्न ७५ दिनको तलब बराबर रकम र वाषिर्क भत्ताबापत ६० दिन बराबरको रकम भत्ता पाइन्छ ।
अधिकृत तहको कर्मचारीले १८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ तलब १० हजार २ सय ८१ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । पोसाकका लागि १३ हजार १ सय २५ र अतिथि सत्कारबापत १ सय रुपैयाँ भत्ता छ । औषधि उपचारमा ५५ दिन र वाषिर्क भत्ताबापत ६० दिनको तलब सुविधा छ । प्रबन्धक -दसौं) तहमा तलब २४ हजार ७ सय ४० र भत्ता ११ हजार २ सय ८१ छ । पोसाकमा १३ हजार ७ सय ५० ।
गत वर्ष परराष्ट्र सेवामा उच्चपदस्थ सरकारी सेवामा रहिसकेकाको देशविदेशमा पढेका छोरीहरू प्रवेश गरेपछि अखबारको हेडलाइन बन्न पुगेको थियो । त्यसो त विदेशमा पनि बस्न पाइने र बाहिर रहँदा छुट्टै भत्ता पाइने भएकाले परराष्ट्र सेवाको छुट्टै शान रहिआएको छ । अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकमा कार्यरत रहँदा छोराछोरीको पढाइको बन्दोबस्त मिलाउन सजिलो हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली नियोग -न्युयोर्क) मा सुब्बाले १ हजार ७५ डलर, अधिकृतले २ हजार ८ सय डलर भत्ता पाउँछन् । वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासमा सुब्बाले १ हजार २० र अधिकृतले १ हजार ३ सय ३० डलर भत्ता पाउँछन् । पेरिसको दूतावासमा सुब्बाले ८ सय १० युरो र उपसचिवले १ हजार २ सय ९० युरो भत्ता बुझ्छन् ।
तलब सुविधा हेर्दा निजामती सेवा सबैभन्दा निम्सरो छ । शाखा अधिकृतमा तलब स्केल १८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ हुने निजामती सेवामा सचिवले ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमात्र हो । तर यसमा आकर्षण घटेको छैन । आकषिर्त हुने वर्ग फेरिएको छ । अंग्रेजी भाषाका राम्रा स्कुलमा पढेर विदेशमा उच्च शिक्षा पाएकाको रुचि हराएको जरुर छ । आजीवन -मृत्यु भए श्रीमतीले समेत) पेन्सन पाइने भएकाले सरकारी सेवामा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ । आपराधिक कार्यमा दोषी ठहरिए मात्र, नत्र समयअघि जागिर जाने गुन्जायस छैन, सरकारी जागिरमा । फेरि सरकार भनेकै सबैलाई नियमन गर्ने भएकाले यसको शान, सामाजिक प्रतिष्ठा छुट्टै प्रकृतिको छ ।
सहसचिवको सुरु तलब स्केल २४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हो । तर सहसचिव हुनासाथ उसका लागि सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहितको छुट्टै सचिवालय हुन्छ । ड्राइभर, गाडी र इन्धनको सुविधा हुन्छ । 'तलब मात्र सबै कुरा होइन,' अर्थका सहसचिव राजन खनाल भन्छन्, 'अधिकारको प्रयोग गर्न पाइने भएकाले पनि यसको छुट्टै गरिमा छ ।' नियमनकारी निकाय भएकाले तलब थोरै भए पनि अधिकारको सदुपयोग गर्दा एउटा प्रहरी अधिकृतले पूरै जिल्ला हल्लाइदिन्छ । यसैले अवसर पाए पनि सचिव हुने सम्भावना भएका सरकारी अधिकृतले जागिर छाडेको बिरलै सुनिन्छ । मुुलुकभरिका बैंक र वित्तीय संस्थाको नियमनकारी भएकाले राष्ट्र बैंकको जागिर छँदै छाडेर निजी लगानीका बैंकमा गएको हत्पती सुनिँदैन ।
-सुरेशराज न्यौपानेको सहयोगमा)
प्रकाशित : आश्विन १३, २०६९ ११:१२